အထနျမမတှေ – My Blog
ကနြေျာ့နာမညျက သားထကျ . . . အသကျက ၂၅ အခုဖွဈတဲ့ဆျောကွီးက အသကျ ၄၀လောကျရှိပွီ. . အသကျကွီးတဲ့ဆျောတှပေို ကွိုကျတော့ ကှကျတိပေါ့. သူ့နာမညျက မသီရိ…အပေးကလဲ လှတျကောငျးဗြာ. ထနျလဲထနျဆိုတော့ ကနြေျာ့ အကွိုကျအမုနျးလိုး တာ အားရပါးရကို သူကလဲ အံကွိတျခံ… ဒီလိုနဲ့တနေ့ အိမျကလူတှေ အကုနျဘုရားဖူးထှကျတဲ့နသေူ့နဲ့ခြိနျးပွီး အိမျကိုလာဖို့ပွော တော့ တယောကျထဲဆိုမလာရဲ့လို့ သူ့သူငယျခငျြးချေါလာရငျဖွဈလားတဲ့… ရတရျချေါလာဆိုပွီး ပွောလိုကျတော့ ည၆နာရီ လောကျကတြော့လာပါလရေော. .သူ့သူငယျခငျြးကလဲ ရှယျတူလောကျပဲသူနဲ့က မသငျဇာတဲ့ ကနြေျာ့ဆျောလိုပဲအကိတျကွီးဗြ တ ခုလတျတဲ့ အိမျထဲရောကျတော့ TVကလာတဲ့ ကိုရီးယားကားခဏကွညျ့ရငျးကနျော ကနြေျာ့ဆျောကွီးက ပငျြးတယျသောကျ ရအောငျ ဆိုတာနဲ့ထှကျဝယျရတော့တာပေါ့. ကနြျောလဲအကွံနဲ့လေ… BLACK SHIELD တှခေညျြး ဝယျခလြာလိုကျတယျ. . အိမျ ရောကျတော့ တီဗီရှမှေ့ာမတှတေ့ာနဲ့ရှာရငျး ကနြေျာ့အခနျးထဲသူတို့ကအဝတျဝငျလဲနတောနဲ့တိုးရောဗြာ. . . ညဝတျလဲတာက ဂါဝနျ လိုမြိုးကိုမှ ဖငျတခွမျးလောကျပဲ ဖုံးတဲ့ဟာလိုမြိုးဆိုတော့ မွငျတာနဲ့လီးကတနျးတောငျခငျြလာတာဗြာ. ဒီလိုနဲ့သောကျရငျးတ ယောကျ၁ဗူးကုနျပီး နောကျဗူးလဲ ဖှငျ့ရော ကနြျောဆျောကွီးက စရဈတော့တာပဲ ( မောငျနျော ဒီနမှေ့ဖောငျးကားနတောပဲ)
တဲ့ ဟုတျပါရဲ့ အောကျငုံ့ကွညျ့မှ အာလာဒငျဘောငျးဘီထဲက ဖောငျးထနတေဲ့ ကိုယျ့လီးကို သတိထာူမိတော့တယျ အ့လိုပွောတော့ သူ့သူငယျခငျြးကပါ စိုကျွကွညျ့ပီး ( ခခြခြ..) ဆိုပွီးရီပါရောဗြာ .အ့နဲ့ကနြေျာ့ဆျောကွီး ကဆကျပွောတယျ ( မောငျ့အကွိုကျ ဆျောကွီးတပှပေါလာတယျ) ဆိုပွီး ( ဖီးလျတှတေကျနတောလားမောငျ ပွစမျးကှာ) မသီရိကအတငျးဘောငျးဘီဆှဲခြှတျတော့ မ ထူးဘူးဆိုပွီး ခြှတျပေးလိုကျတော့ ကနြေျာ့လီးကလဲ တနျးခနဲကိုကနျလာရောဗြာ. . . မသငျဇာကလဲ ( အိုးးးးး ) ဆိုပွီးထအျောပါ လရေော မသီရိက “မောငျစိတျလြော့ထား” ဆိုပီး အနောကျကနဖေကျပီး သူ့ရငျခှငျထဲ ထညျ့လိုကျပါတယျ လီးကိုတှော့ဆှနရေငျးနဲ့ (သငျဇာ ငါ့ဘဲလေးလီးကိုစုတျခငျြဘူးလားးးဟာ) (သီရိနငျမူးရငျငွိမျငွိမျနနေျော ငါ့လာမဆှနဲ့သနောမရဲ့) (သငျဇာငါကောငျးပွော နတော နငျ့ငါ့ဘဲလီးကို စုတျခငျြစုတျ) (နငျတကယျပွောနတောလားသီရိ)
( အေးပါဆိုဟာ နငျ့လငျနဲ့ကှဲထားတော့ ဆာနမှော သိတရျ) (မောငျ ရဒေီနတေ့ော့ မကိုကော သငျဇာ့ကိုကော မယားတျောပွီး ကောငျးကောငျးလေး လိုးပေးနျော မောငျ) ( ဟငျ မ တကယျပွောနတောလား… ) ကနြျောလဲ ရှကျမနတေော့ပဲ ဒဲ့ပဲ ပွောခလြိုကျ တော့တယျ… ( အှနျးပေါ့… သငျဇာ့ကိုချေါလာတာ မောငျ့ဆန်ဒကို ဖွညျ့ပေးခငျြလို့လေ ပွီးတော့ သူလဲဆာနမှောပဲ ဆိုပွီး ကိုယျခငျြး စာလို့ သနားလို့..) ( သီရိ..နငျကလအေရမျးခဈြဖို့ကောငျးတာပဲ… အ့ကွောငျ့ အရမျးခဈြနရေတာ..) ဆိုပွီး… မသီရိရဲ့နောကျကနေ ထပျဖကျထားတယျ.. အဲ့တော့ ကနြေျာ့ကိုမသီရိကဖကျ မ ကို မသငျဇာက ဖကျပေါ့…မ က ကနြေျာ့ကို အဝတျအကုနျခြှတျခိုငျးတာနဲ့ ထပွီးခြှတျရငျး အကွံတခုရတာနဲ့…. ထမငျးစားခနျးထဲက ခုံနှဈလုံးယူပီး သူတို့ကို ထိုငျခိုငျးရငျး ရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ ဘောငျးဘီတိုလေး နဲ့ ရပျနမေိတယျ… ပွီးတော့းသူတို့အနောကျကိုသှားပွီး တယောကျပုခုံးတဖကျဆီပျေါ လကျတငျပီး နှဈယောကျလုံးရဲ့ကွားထဲ တိုးတိုးလေးပွောလိုကျတရျ ( အခုကစပွီးစိတျကိုလြော့ထားနျော သကျတူရှယျတှလေိုပုံစံနဲ့ ကဲကွရအောငျ… သီရိနဲ့သငျဇာ ငဆကျ လို့ပဲ ချေါတော့ အခုကစပွီး…)
ပွောနရေငျးနဲ့ပဲ လကျတဖကျစီက နို့တဈလုံးစီပျေါကိုဖှဖှလေး ဖွဈညှဈပေးရငျး ( အိုး…ရှယျပဲဟာ အိစကျနတောနို့တှကေ ငါ့ခဈြသူ နှဈယောကျလုံး ကိုခဈြတယျကှာ…. မှမှ..) ဆိုပွီး တယောကျကိုတခါနမျးလိုကျတယျ… (အခုကစပွီး သီရိနဲ့သငျဇာ လို့ပဲသုံးပါတော့ မယျ) နမျးပွီးတာနဲ့ သူတို့အရှကေို့ပွနျလာပွီး ခါးကို ကော့လို့ ဘောငျးဘီတိုထဲက လီးကိုတငျးတငျးလေး စုတျကိုငျရငျး အပွငျကို ထုတျလိုကျတရျ ( အိုး ပစ်စညျးကရှယျပဲငဆကျရာ… နငျ့ဆျောဖွဈရတာ ထီပေါကျသလိုပဲ… သီရိ ငါတို့ဘဲလီးကွီး ကွိုကျရဲ့လား….) သငျဇာကတော့ တခုလပျဆိုတဲ့အတိုငျး ပွောရဲဆိုရဲတယျဗြ… ( ကွိုကျတာပေါ့ သငျဇာရာ… အဲ့လီးကွီးမွငျွ့ပီး စောကျရညျတောငျ စိမျ့နပွေီ..) (နငျတို့လဲ အကုနျခြှတျတော့လဟော… ) ဆိုပွီး လီးအတောငျလိုကျနဲ့ ခါးထောကျပွီး ကွညျ့နလေိုကျတယျ… ( အိုးသီရိ ရယျ ငါလဲစပကျထဲကတျောတျော ယားလာပွီဟယျ…)
ဆိုပွီး သငျဇာကသီရိဖကျလှညျ့ကာ နှတျခမျးခငျြးထိပီး ကဈဆငျစဆှဲတော့ သီရိကလဲပွနျဆှဲတယျ…. ပွီးတော့ ဆှဲနရေငျး အားမရ တော့မတျတပျရပျပွီး အတှဲတှဆှေဲသလိုကို အားရပါးရဆှဲတော့တာ တယောကျဖငျတှေ တယောကျညှဈလိုကျ… ပှတျသတျလိုကျနဲ့ ကွညျ့ရတာတျောတေျာ့ကိုအရသာရှိတယျဗြာ… နှဈယောကျလုံးဖီးလျတှအေရမျးတကျနတေော့ ရှယျကိုကိုငျလိုကျ နယျလိုကျ ဆှဲ လိုကျနဲ့ အားရစရာကွီးပဲ…. ဆှဲနရေငျးနဲ့ သငျဇာကသီရိကို ကုတငျပျေါလှဲခလြိုကျရငျးနဲ့ လညျတိုငျတှနေား နမျးလိုကျ…. နားထငျနား ကို လြှာနဲ့ထိုးလိုကျလုပျနတေော့တယျ တဖွညျးဖွညျးနို့နားရောကျလာတော့ စူပွီးထှကျနတေဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးကို သှားလေးနဲ့ မနာ အောငျ ဖှဖှလေးဖိကိုကျလိုကျတော့ ( အား… သငျဇာရာ ကောငျမ အရမျးလိုကျတာ…. ငါ့နို့ကွီးတငျးနပွေီ…. ကနျြဲ့တဖကျလဲ နယျ ပေးဟာ အားရပါးရ…ငါ့စောကျပတျလညျး ယားယား အာ ဟား….)
ပွောနရေငျးတနျးလနျးမှာပဲရုတျတရကျ သငျဇာက အောကျဖကျကို လြောဆငျးပွီး စောကျပတျနားကို ပါးစပျလေးတပေီ့း ဆှဲစုပျ လိုကျတော့ သီရိ စကားတောငျမဆကျနိုငျတော့ဘူး… လကျနှဈဖကျကလဲ အားရပါးရကို နို့နှဈလုံးကို ညှဈထားတာ… ( အား….. အား…. ရှီး….. ထှကျခငျြနပွေီ မရတော့ဘူး… အားအား…. ဟငျ့ဟငျ့ဟငျ့…. ဆကျရေ ကယျပါအုံး အားဒ..) သီရိဘယျလောကျအျော အျော သငျဌာက စောကျပတျနားမှာ ပါးစပျတပေိ့း စောကျစိစုပျတာက မရပျဘူး… ကွညျ့လို့တော့တျောတျောကို ကောငျးတာဗြာ…
ဒီလိုမြိုးဆျောနှဈပှအေပွငျမှာ လုပျြာကို မွုဖူးခငျြနတောကွာပွီ… အခုလကျတှမွေ့ကျလိုကျရတော့ ထငျထားတာထကျတောငျ အရသာရှိနသေေးတယျ….. သငျဇာလဲ မောလာတယျထငျတယျ စောပျစိစုတျနတောကို ရပျလိုကျပွီး…. ( ငဆကျ နငျအိပျယာပေါမှာ အမွနျလာလှဲအိပျလိုကျ..) ဆိုတော့… မွနျမွနျပဲလှဲလိုကျတယျ…. ( သီရိနငျမွနျမွနျတကျဆောငျ့တော့. ) သီရိလဲ ထကနြေျာ့ကို ကြောပေးရကျနပွေီး လီးနဲ့ စောကျထုတျကိုတပေီ့း တခါထဲကိုထိုငျခလြိုကျတာ… ( အား…. သီရိဆောငျ့စမျးဟာ ငဆကျကို အသေ ဆောငျ့စမျး…) သငျဇာကအဲ့အခြိနျ သီရိရဲ့ ရှမှေ့ာမတျတကျရပျပွီး သီရိရဲ့ဆံပငျတှကေိုစုပီးကိုငျရငျး သူ့စောကျပတျနဲ့ သီရိရဲ့မကျြနှာ ကိုပှတျတော့တယျ ( အှနျး… အှနျး…. ) သီရိမှာမအျောနိုငျ သငျဇာက သူ့စောကျပတျနဲ့ ပါးစပျကို အတငျးဆှဲပှတျနတေော့….
(အား အား…. အား…. ယကျယကျ အသယေကျ ကောငျမှာထှကျတော့ မယျ အား ရှီး….. ရှီး….. အား….) ( ဖှတျဖှတျဖှတတျ….. အား ဒ ပွှတျပွှတျ…. အား…. ကောကျးတယျ..) သီရိကိုယျလုံးလေးဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျဖွဈရော သငျဇာပါ…. ခါးကွီးကော့ပီး သိရီဆို ပိုတှေ အတငျးဆောငျ့ဆှဲရငျး. သူတို့နှဈယောကျလုံး ပွိုငျတူပွီးသှားတော့တယျ…..
ကျနော့်နာမည်က သားထက် . . . အသက်က ၂၅ အခုဖြစ်တဲ့ဆော်ကြီးက အသက် ၄၀လောက်ရှိပြီ. . အသက်ကြီးတဲ့ဆော်တွေပို ကြိုက်တော့ ကွက်တိပေါ့. သူ့နာမည်က မသီရိ…အပေးကလဲ လွှတ်ကောင်းဗျာ. ထန်လဲထန်ဆိုတော့ ကျနော့် အကြိုက်အမုန်းလိုး တာ အားရပါးရကို သူကလဲ အံကြိတ်ခံ… ဒီလိုနဲ့တနေ့ အိမ်ကလူတွေ အကုန်ဘုရားဖူးထွက်တဲ့နေ့သူနဲ့ချိန်းပြီး အိမ်ကိုလာဖို့ပြော တော့ တယောက်ထဲဆိုမလာရဲ့လို့ သူ့သူငယ်ချင်းခေါ်လာရင်ဖြစ်လားတဲ့… ရတရ်ခေါ်လာဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ ည၆နာရီ လောက်ကျတော့လာပါလေရော. .သူ့သူငယ်ချင်းကလဲ ရွယ်တူလောက်ပဲသူနဲ့က မသင်ဇာတဲ့ ကျနော့်ဆော်လိုပဲအကိတ်ကြီးဗျ တ ခုလတ်တဲ့ အိမ်ထဲရောက်တော့ TVကလာတဲ့ ကိုရီးယားကားခဏကြည့်ရင်းကနော် ကျနော့်ဆော်ကြီးက ပျင်းတယ်သောက် ရအောင် ဆိုတာနဲ့ထွက်ဝယ်ရတော့တာပေါ့. ကျနော်လဲအကြံနဲ့လေ… BLACK SHIELD တွေချည်း ဝယ်ချလာလိုက်တယ်. . အိမ် ရောက်တော့ တီဗီရှေ့မှာမတွေ့တာနဲ့ရှာရင်း ကျနော့်အခန်းထဲသူတို့ကအဝတ်ဝင်လဲနေတာနဲ့တိုးရောဗျာ. . . ညဝတ်လဲတာက ဂါဝန် လိုမျိုးကိုမှ ဖင်တခြမ်းလောက်ပဲ ဖုံးတဲ့ဟာလိုမျိုးဆိုတော့ မြင်တာနဲ့လီးကတန်းတောင်ချင်လာတာဗျာ. ဒီလိုနဲ့သောက်ရင်းတ ယောက်၁ဗူးကုန်ပီး နောက်ဗူးလဲ ဖွင့်ရော ကျနော်ဆော်ကြီးက စရစ်တော့တာပဲ ( မောင်နော် ဒီနေ့မှဖောင်းကားနေတာပဲ)
တဲ့ ဟုတ်ပါရဲ့ အောက်ငုံ့ကြည့်မှ အာလာဒင်ဘောင်းဘီထဲက ဖောင်းထနေတဲ့ ကိုယ့်လီးကို သတိထာူမိတော့တယ် အ့လိုပြောတော့ သူ့သူငယ်ချင်းကပါ စိုက်ကြည့်ပီး ( ချချချ..) ဆိုပြီးရီပါရောဗျာ .အ့နဲ့ကျနော့်ဆော်ကြီး ကဆက်ပြောတယ် ( မောင့်အကြိုက် ဆော်ကြီးတပွေပါလာတယ်) ဆိုပြီး ( ဖီးလ်တွေတက်နေတာလားမောင် ပြစမ်းကွာ) မသီရိကအတင်းဘောင်းဘီဆွဲချွတ်တော့ မ ထူးဘူးဆိုပြီး ချွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျနော့်လီးကလဲ တန်းခနဲကိုကန်လာရောဗျာ. . . မသင်ဇာကလဲ ( အိုးးးးး ) ဆိုပြီးထအော်ပါ လေရော မသီရိက “မောင်စိတ်လျော့ထား” ဆိုပီး အနောက်ကနေဖက်ပီး သူ့ရင်ခွင်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ် လီးကိုတွော့ဆွနေရင်းနဲ့ (သင်ဇာ ငါ့ဘဲလေးလီးကိုစုတ်ချင်ဘူးလားးးဟာ) (သီရိနင်မူးရင်ငြိမ်ငြိမ်နေနော် ငါ့လာမဆွနဲ့သေနာမရဲ့) (သင်ဇာငါကောင်းပြော နေတာ နင့်ငါ့ဘဲလီးကို စုတ်ချင်စုတ်) (နင်တကယ်ပြောနေတာလားသီရိ)
( အေးပါဆိုဟာ နင့်လင်နဲ့ကွဲထားတော့ ဆာနေမှာ သိတရ်) (မောင် ရေဒီနေ့တော့ မကိုကော သင်ဇာ့ကိုကော မယားတော်ပြီး ကောင်းကောင်းလေး လိုးပေးနော် မောင်) ( ဟင် မ တကယ်ပြောနေတာလား… ) ကျနော်လဲ ရှက်မနေတော့ပဲ ဒဲ့ပဲ ပြောချလိုက် တော့တယ်… ( အွန်းပေါ့… သင်ဇာ့ကိုခေါ်လာတာ မောင့်ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးချင်လို့လေ ပြီးတော့ သူလဲဆာနေမှာပဲ ဆိုပြီး ကိုယ်ချင်း စာလို့ သနားလို့..) ( သီရိ..နင်ကလေအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ… အ့ကြောင့် အရမ်းချစ်နေရတာ..) ဆိုပြီး… မသီရိရဲ့နောက်ကနေ ထပ်ဖက်ထားတယ်.. အဲ့တော့ ကျနော့်ကိုမသီရိကဖက် မ ကို မသင်ဇာက ဖက်ပေါ့…မ က ကျနော့်ကို အဝတ်အကုန်ချွတ်ခိုင်းတာနဲ့ ထပြီးချွတ်ရင်း အကြံတခုရတာနဲ့…. ထမင်းစားခန်းထဲက ခုံနှစ်လုံးယူပီး သူတို့ကို ထိုင်ခိုင်းရင်း ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဘောင်းဘီတိုလေး နဲ့ ရပ်နေမိတယ်… ပြီးတော့းသူတို့အနောက်ကိုသွားပြီး တယောက်ပုခုံးတဖက်ဆီပေါ် လက်တင်ပီး နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ကြားထဲ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တရ် ( အခုကစပြီးစိတ်ကိုလျော့ထားနော် သက်တူရွယ်တွေလိုပုံစံနဲ့ ကဲကြရအောင်… သီရိနဲ့သင်ဇာ ငဆက် လို့ပဲ ခေါ်တော့ အခုကစပြီး…)
ပြောနေရင်းနဲ့ပဲ လက်တဖက်စီက နို့တစ်လုံးစီပေါ်ကိုဖွဖွလေး ဖြစ်ညှစ်ပေးရင်း ( အိုး…ရှယ်ပဲဟာ အိစက်နေတာနို့တွေက ငါ့ချစ်သူ နှစ်ယောက်လုံး ကိုချစ်တယ်ကွာ…. မွမွ..) ဆိုပြီး တယောက်ကိုတခါနမ်းလိုက်တယ်… (အခုကစပြီး သီရိနဲ့သင်ဇာ လို့ပဲသုံးပါတော့ မယ်) နမ်းပြီးတာနဲ့ သူတို့အရှေ့ကိုပြန်လာပြီး ခါးကို ကော့လို့ ဘောင်းဘီတိုထဲက လီးကိုတင်းတင်းလေး စုတ်ကိုင်ရင်း အပြင်ကို ထုတ်လိုက်တရ် ( အိုး ပစ္စည်းကရှယ်ပဲငဆက်ရာ… နင့်ဆော်ဖြစ်ရတာ ထီပေါက်သလိုပဲ… သီရိ ငါတို့ဘဲလီးကြီး ကြိုက်ရဲ့လား….) သင်ဇာကတော့ တခုလပ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြောရဲဆိုရဲတယ်ဗျ… ( ကြိုက်တာပေါ့ သင်ဇာရာ… အဲ့လီးကြီးမြင်ြ့ပီး စောက်ရည်တောင် စိမ့်နေပြီ..) (နင်တို့လဲ အကုန်ချွတ်တော့လေဟာ… ) ဆိုပြီး လီးအတောင်လိုက်နဲ့ ခါးထောက်ပြီး ကြည့်နေလိုက်တယ်… ( အိုးသီရိ ရယ် ငါလဲစပက်ထဲကတော်တော် ယားလာပြီဟယ်…)
ဆိုပြီး သင်ဇာကသီရိဖက်လှည့်ကာ နှတ်ခမ်းချင်းထိပီး ကစ်ဆင်စဆွဲတော့ သီရိကလဲပြန်ဆွဲတယ်…. ပြီးတော့ ဆွဲနေရင်း အားမရ တော့မတ်တပ်ရပ်ပြီး အတွဲတွေဆွဲသလိုကို အားရပါးရဆွဲတော့တာ တယောက်ဖင်တွေ တယောက်ညှစ်လိုက်… ပွတ်သတ်လိုက်နဲ့ ကြည့်ရတာတော်တော့်ကိုအရသာရှိတယ်ဗျာ… နှစ်ယောက်လုံးဖီးလ်တွေအရမ်းတက်နေတော့ ရှယ်ကိုကိုင်လိုက် နယ်လိုက် ဆွဲ လိုက်နဲ့ အားရစရာကြီးပဲ…. ဆွဲနေရင်းနဲ့ သင်ဇာကသီရိကို ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်ရင်းနဲ့ လည်တိုင်တွေနား နမ်းလိုက်…. နားထင်နား ကို လျှာနဲ့ထိုးလိုက်လုပ်နေတော့တယ် တဖြည်းဖြည်းနို့နားရောက်လာတော့ စူပြီးထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို သွားလေးနဲ့ မနာ အောင် ဖွဖွလေးဖိကိုက်လိုက်တော့ ( အား… သင်ဇာရာ ကောင်မ အရမ်းလိုက်တာ…. ငါ့နို့ကြီးတင်းနေပြီ…. ကျန်ျဲ့တဖက်လဲ နယ် ပေးဟာ အားရပါးရ…ငါ့စောက်ပတ်လည်း ယားယား အာ ဟား….)
ပြောနေရင်းတန်းလန်းမှာပဲရုတ်တရက် သင်ဇာက အောက်ဖက်ကို လျောဆင်းပြီး စောက်ပတ်နားကို ပါးစပ်လေးတေ့ပီး ဆွဲစုပ် လိုက်တော့ သီရိ စကားတောင်မဆက်နိုင်တော့ဘူး… လက်နှစ်ဖက်ကလဲ အားရပါးရကို နို့နှစ်လုံးကို ညှစ်ထားတာ… ( အား….. အား…. ရှီး….. ထွက်ချင်နေပြီ မရတော့ဘူး… အားအား…. ဟင့်ဟင့်ဟင့်…. ဆက်ရေ ကယ်ပါအုံး အားဒ..) သီရိဘယ်လောက်အော် အော် သင်ဌာက စောက်ပတ်နားမှာ ပါးစပ်တေ့ပိး စောက်စိစုပ်တာက မရပ်ဘူး… ကြည့်လို့တော့တော်တော်ကို ကောင်းတာဗျာ…
ဒီလိုမျိုးဆော်နှစ်ပွေအပြင်မှာ လုပ်ျာကို မြုဖူးချင်နေတာကြာပြီ… အခုလက်တွေ့မြက်လိုက်ရတော့ ထင်ထားတာထက်တောင် အရသာရှိနေသေးတယ်….. သင်ဇာလဲ မောလာတယ်ထင်တယ် စောပ်စိစုတ်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး…. ( ငဆက် နင်အိပ်ယာပေါမှာ အမြန်လာလှဲအိပ်လိုက်..) ဆိုတော့… မြန်မြန်ပဲလှဲလိုက်တယ်…. ( သီရိနင်မြန်မြန်တက်ဆောင့်တော့. ) သီရိလဲ ထကျနော့်ကို ကျောပေးရက်နေပြီး လီးနဲ့ စောက်ထုတ်ကိုတေ့ပီး တခါထဲကိုထိုင်ချလိုက်တာ… ( အား…. သီရိဆောင့်စမ်းဟာ ငဆက်ကို အသေ ဆောင့်စမ်း…) သင်ဇာကအဲ့အချိန် သီရိရဲ့ ရှေ့မှာမတ်တက်ရပ်ပြီး သီရိရဲ့ဆံပင်တွေကိုစုပီးကိုင်ရင်း သူ့စောက်ပတ်နဲ့ သီရိရဲ့မျက်နှာ ကိုပွတ်တော့တယ် ( အွန်း… အွန်း…. ) သီရိမှာမအော်နိုင် သင်ဇာက သူ့စောက်ပတ်နဲ့ ပါးစပ်ကို အတင်းဆွဲပွတ်နေတော့….
(အား အား…. အား…. ယက်ယက် အသေယက် ကောင်မှာထွက်တော့ မယ် အား ရှီး….. ရှီး….. အား….) ( ဖွတ်ဖွတ်ဖွတတ်….. အား ဒ ပြွတ်ပြွတ်…. အား…. ကောက်းတယ်..) သီရိကိုယ်လုံးလေးဆန့်ငင် ဆန့်ငင်ဖြစ်ရော သင်ဇာပါ…. ခါးကြီးကော့ပီး သိရီဆို ပိုတွေ အတင်းဆောင့်ဆွဲရင်း. သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ပြိုင်တူပြီးသွားတော့တယ်…..
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အထနျမမတှေ